Ukuphinda ubambe ifoto kwakhona ngeAdobe Photoshop | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukuphinda ubambe ifoto kwakhona ngeAdobe Photoshop
Ukuphinda ubambe ifoto kwakhona ngeAdobe Photoshop kubo bonke abo bafuna ukuloba iifoto zabo ngokukhawuleza kwaye ngaphandle kwesidingo solwazi oluphambili lwe Photoshop. Uninzi lwabantu luneefoto ezinomgangatho obonakalayo ombi: umahluko ophantsi, iithowuni ezingacacanga, njl.njl. uneenkumbulo ezingcono ezingenakufa.
Fumana phucula zonke ezo foto zohambo lwakho ngendlela ezenzekelayo ngokusebenzisa i isenzo se Photoshop oko kuyakuvumela sebenzisa i-retouch efanayo kuzo zonke iifoto zakho. Ukuba yonke into oyifunayo kukuphucula imifanekiso kancinci ngenxa yokuba unebhlog okanye into efana nale isikhundla Iya kukunceda kakhulu malunga naloo nto.
Ayisithi sonke ekufuneka sibe ziingcali zeFotohop sifunde ukuphucula kancinci iifoto esizithathileyo kuhambo okanye iifoto nje zosapho esizithandayo yinike umgangatho ongaphezulu, yiyo loo nto kule post siza kubona ezinye izixhobo zokuphucula imifanekiso yethu Ukuchaza ngokukhawuleza amanyathelo ngendlela enocwangco ukwenza inkqubo ibelula. Siza kusebenzisa ubuchule bobuchule kodwa obushwankathelweyo kugxila kuphela kukhetho olusisiseko ukuphucula umgangatho womfanekiso.
Amanyathelo adwelisiweyo a Isikhokelo esinokwahluka ngokuxhomekeke kwiimfuno zomsebenzisi ngamnye, into efanelekileyo kukuba elowo uthatha isigqibo sokuba zeziphi na iimpembelelo zokufaka kumfanekiso ngamnye. Ukufunda okungcono kungcono ukuba ungakopi kodwa uqonde iikhonsepthi kwaye uzisebenzise ngendlela yethu ...
Kule nto isikhundla Siza kufunda oku kulandelayo:
Ukuphucula umgangatho weefoto zethu
Sebenzisa uhlengahlengiso lwamaleko
Susa izinto ezingafunekiyo emfanekisweni
Yenza isenzo sokuzenzekelayo iinkqubo
1 Sivula umfanekiso wethu kwi-Photoshop
1.1 Yenza uhlengahlengiso lweeLali (Ifoto eyiRetouch)
1.2 Ukuqaqamba kunye nokwahlulahlula ungqimba
1.3 Uluhlu lokuhlengahlengisa amanqanaba
1.4 Uhlengahlengiso lobunzima
1.5 Uluhlu lokuhlengahlengisa umbala
2 Susa izinto ezingafunekiyo emfanekisweni
2.1 Yenza isenzo kwi-Photoshop (yenza ngokuzenzekelayo ukuphinda ubambe ifoto)
Sivula umfanekiso wethu kwi-Photoshop
Into yokuqala esiza kuyenza kukuba vula umfanekiso wethu kwi Photoshop ukuqala ukuyibuyisela kwakhona. Ngomfanekiso ovulekileyo kwi Photoshop Cofa kwiqhosha lasekunene lempuku kubume obukhulu kwaye uliphinde.
Nje ukuba siphindaphinde umaleko, into elandelayo ekufuneka siyenzile kukuqala yenza uhlengahlengiso, Kulapho siza kuphinda sisebenzise umfanekiso wethu.
Yenza uhlengahlengiso lweeLali (Ifoto eyiRetouch)
Uluhlu lohlengahlengiso luyasivumela yenza umaleko ophezulu osebenza kwinqanaba elingaphantsi, Ngamanye amagama iyasivumela sebenzisa iziphumo kumaleko ngaphandle kokuguqula umaleko wethu wokuqala. Kutheni usenza uluhlu lolungelelwaniso kwaye ungasebenzisi ngqo iziphumo? kuba umaleko wohlengahlengiso usivumela ukuba sibuyele lungisa utshintsho nangaliphi na ixesha esifuna ngalo, kwelinye icala kuyasinceda ukuba sibe nomfanekiso-ngqondweni wolunye utshintsho kumfanekiso.
Emva kokubona ulwazi oluncinci malunga neendlela zokuhlengahlengisa esinokuqala kuzo phinda ubeke umfanekiso wethu.
Ukuqaqamba kunye nokwahlulahlula ungqimba
Cinezela iqhosha lokulungelelanisa ibekwe emazantsi endawo yomaleko kwaye ukhethe u ukukhanya kunye nolwahlulo lolungelelwaniso. Olu luhlu lolungelelwaniso nikuvumela ukuba ukhanyise kwaye uthelekise kunye nomfanekiso wethu.
Uluhlu lokuhlengahlengisa amanqanaba
Into elandelayo esiza kuyenza kukwenza ifayile ye Uluhlu lokuhlengahlengisa amanqanaba ukwandisa izinto eziphambili kunye nezithunzi yomfanekiso wethu, abamnyama nabamhlophe baya kuba njalo ukuthetha ngakumbi.
Ngamaxesha amaninzi siza kudibana iifoto ezinombala othulisiweyo, oku kunokulungiswa ngokulula ukuba sisebenzisa i uhlengahlengiso lobungakanani. Sigqiba ekubeni bubungakanani bembala esifuna kumfanekiso wethu.
Uluhlu lokuhlengahlengisa umbala
Amaxesha amaninzi xa sibona iifoto zethu ngokulandelelana kwazo, siyaqonda ukuba zine- Umbala weorenji ovela kwilanga elininzi okanye omnye umbala obalaseleyo otshintsha ngokupheleleyo umfanekiso wethu, oku kubizwa ngokuba ngumbala obalaseleyo kwaye inokulungiswa ngombala wokuhlengahlengisa umbala.
La umbala okhutshiweyo Ayikuko ukusilela ngokwako kodwa yinto eqhelekileyo kuba ifoto yathathwa kwezo meko ezenza imibala yayo yayiyezo. Ngaba unako lungisa umbala obekiweyo okanye ukuyitshintsha ngokuthanda kwethu, sisenayo ifoto enombala o-orenji obalaseleyo kwaye sinomdla wokuba ibluhlaza ngakumbi, nangayiphi na imeko sithathe isigqibo.
Sebenzisa Ukulinganisa umbala kulula kakhulu Kufuneka senze enye uhlengahlengiso kumaleko ecolor kwaye emva koko sithathe isigqibo sokuba yeyiphi imibala esifuna ukuyiguqula, ngokudibanisa imibala siya kufika kule nto siyikhangelayo.
Sonke sidibene nefoto yohambo apho into engafunekiyo ingene kumfanekiso, Ukusuka kumntu ohamba emva kwakho kwaye awuzange uyiqonde xa ususa ifoto kwikati ezula kuloo ndawo, nantoni na ofuna ukuyisusa ingenziwa ngokukhawuleza Isixhobo sepatch Photoshop.
La Isixhobo sepatch de Photoshop iyasivumela khetha indawo ethile kwaye ubeke enye endaweni yayoLe yindlela esisebenza ngayo esi sixhobo, ngamanye amagama sikhetha indawo enesiphoso kwaye siyilungise ngokugubungela isiphoso kwindawo engenasiphako (kubonakala ngathi kuyadidekisa kodwa kulula kakhulu).
Sikhetha isixhobo sepatch kwaye senza ukhetho lwento esifuna ukuyicima, Emva kwexesha sihambisa ukhetho kwindawo esecaleni kwempazamo esifuna ukuyiphelisa (oku kwenza ukuba ukubamba kwakhona kungabonakali kangako kuba izibane nezithunzi ziyafana kufutshane nephutha kunokuba zikude)
Sele sigqibile buyisa umfanekiso wethu ngokukhawuleza kwaye ngokulula usebenzisa nje umaleko wohlengahlengiso lweFotohop. Into elandelayo esiza kuyenza ngoku yile yenza i-automate inkqubo ukuze siyisebenzise kwiifoto zethu xa sifuna ukuphinda i-retouch efanayo.
Yenza isenzo kwi-Photoshop (yenza ngokuzenzekelayo ukuphinda ubambe ifoto)
Isenzo sinye kuphela Ukulandelelana kwezenzo eziqokelelweyo ezisetyenziswe emfanekisweni ngokuzenzekelayo, oku kuluncedo kakhulu xa sinezinto ezininzi imifanekiso efuna i-retouch efanayo en Photoshop. Into esiza kuyenza iyafana naleyo siyenzileyo kumanyathelo angaphambili kodwa kuqala siza kwenza ifayile ye- ukurekhoda yantoni Photoshop rekhoda kwaye ugcine lonke utshintsho esiyenzayo emfanekisweni.
Sivula el imenyu yentshukumo ebekwe kwi window ephezulu yemenyu ye Photoshop, Nje ukuba siyivule, into elandelayo ekufuneka siyenzile kukunika yenza inyathelo elitsha (iqhosha liyafana nokwenza umaleko omtsha)
Senza isenzo esitsha ngokunqakraza kwi icon Uluhlu olutsha kwimenyu yesenzo. Nje ukuba senze isenzo esitsha, imenyu iya kuvula apho sinakho khona chaza isenzo sethu.
Emva koku sicinezela i icon qalisa ukurekhoda (icon ejikelezayo) kunye Saqala ukuphinda senze umfanekiso wethu, ukusukela ngoku lonke utshintsho luya kubhaliswa kwaye lugcinwe.
Emva kokwenza konke ukuchukumisa ngokomfanekiso wethu sinika i icon yeka isenzo sokurekhoda kwaye isenzo sethu siya kuba silungele ukusetyenziswa kuzo zonke iifoto zethu ezizayo. Kuba sebenzisa isenzo kufuneka nje vula umfanekiso yiya kwimenyu yesenzo jonga isenzo sethu kwaye ubethe umdlalo. Ukuba sifuna ukwenza naluphi na utshintsho ekubuyiseni kwakhona ifoto ethile kuya kufuneka ucofe kabini kumaleko ohlengahlengiso kwaye yenza utshintsho lomntu kumfanekiso omnye.
ukuba ukuphucula iifoto zethu akufuneki ukuba sibe ziingcali kuzo Photoshop ukuba le nto siyifunayo kukwenza kakhulu ilula kwaye iyakhawuleza ukuphucula umgangatho wemifanekiso. Ngoku ungaphucula zonke ezo foto zikruqulayo ngaphandle kobomi bokubonakalayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Photoshop » Ukuphinda ubambe ifoto kwakhona ngeAdobe Photoshop
Utshintsha njani umbala weenwele kumfanekiso ngeFotohop
Uyenza njani isiphumo sephikseli esingunxantathu